IINKQUBO YE-AARTO YAMANQAKU EDEMRI OKANYE AMANQAKU OKWEHLISWA
Ukuqonda umthetho i-AARTO
iiZiphumo ezakhlukeneyo zonkungawuthobeli umthetho.
Kwenzeka ntoni xa omnye wabaqhubi bahko enqunyanyisiwe.
Abiwa njani amqaku la.
Ke ungabakhusela njani abasebenzi bakho kunye neshishini
Ngaba iNkampani yakho ilungile?
/Ngaphaya koko, lo Mtheho ucacisa iinkqubo ezinxulumene newaranti, ukuvavanywa kwenkqubo, kunye nenkqubo yenqanaba labo bangathobeliyo.
Isiqendu 4 - Ukwenza iAARTO ibe yeyona nto iphamvili kushishino
iiNkampani kuya kufuneka zijonge ngokutsha iikhontrakthi zazo zengqesho, imigaqo-nkqubo kunye neenkqubo.
i-AARTO iya kohlwaya amashishini kunye nabaqhubi bezithuthi abanetyala lokwaphula umthetho wendlela ngokubeka amanqaku angafanelekanga. Nje ukuba kugqithiswe umda wamanqaku, iphepha-mvume lokuqhuba liyanqunyanyiswa kangangeenyanga ezintathu kwaye emva kweeofisi ezintathu liya kucinywa. Oku kuya kuba nefuthe elikhulu kwiinkampani ezinezithuthi okanye abasebenzi abaxhomekeke kwiilayisensi zabo zokuqhuba ukuze bafezekise imisebenzi yabo. Izithuthi zenkampani yakho nazo aziyi kuhlawulwa kuwo nawaphi na amabango e-inshurensi ukuba abaqhubi bakho banqunyanyisiwe iilayisensi.
Lungiselela namhlanje kwaye uqiniseke ukuba unazo zonke iinkqubo zakho kunye nemigaqo-nkqubo endaweni..